Home Wararka Farmaajo oo ogolaaday in kiiska lagu dhameeyo wadahadal
Sida aay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen MOL, dowladda Qatar ayaa ka dhex sameysay heshiis dib loogu soo celinaayo xiriirka Diblomaasi ee Kenya iyo Soomaaliya taasoo uu ogolaaday Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Heshiiska aya sidoo kale waxaa qeyb ka ah in dowladda Qatar aay garwadeen ka noqoto kiiska Badda isla markaana lagu dhammeeyo wadahadal dhex mara labada dal.
Heshiiska ayaa lagu wadaa in lagu saxiixo magaalada Dooxa bisha May 28. Amiirka Qatar ayaa ka noqonaayo garwadeen (Gaurantor) Heshiiska labada Dal, waxaana lagu saxiixi doonaa xaflad weyn uu soo qaban qaabinayo Amiirka Dalka Qatar.
Sharciyan maadaama uu ka dhammaaday muddo xileedkiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bishii Febraayo 8, 2021 ma saxiixi karaa heshiis noocan ah? Waa su’aal aay dadbadani is weydiinayaan balse waxaan dhowrnaa waa heshiiskaas oo uu saxiixo Farmaajo halka uu ku danbeyn doono.